मिति २०७५ जेठ १४ गते
सरकारले पहिलेका बिदाहरूमा कटौती गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले पृथ्वी जयन्ती र गणतन्त्र दिवसको विदालाई कटौती गर्न हुन्न भन्ने माग गर्दैै आएको थियो । सञ्चार माध्यमद्वारा थाहा भए अनुसार केन्द्रले पृथ्वी जयन्ती र गणतन्त्र दिवसको विदालाई कटौती गरेको भएपनि ५ नं. प्रदेशले गणतन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन र स्वगत गर्दछ । त्यस प्रकारको निर्णयका लागि हामीले ५ नं. प्रदेशको सरकारलाई बधाई पनि दिन्छौँ ।
दाङको शान्तिनगरमा १२ सयभन्दा बढी मानिसहरू झाडापखालाको प्रभावमा परेको थाहा पाएर हामीलाई धेरै नै दुःख लागेको छ । हामीले त्यहाँ समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह समेतसित माग गर्दछौँ । आखिर त्यति ठूलो सङ्ख्यामा एउटै गाउँका मानिसहरू किन झाडा पखालाको सिकार भए यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको छानवीन गरी त्यसको कारणको निवारण गर्न पनि हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।